को बन्ला अर्थमन्त्री ?(हेर्नुहोस..)
August 25, 2020 adminLeaveaComment on को बन्ला अर्थमन्त्री ?(हेर्नुहोस..)
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७७, मंगलबार
काठमाडौं, ९ भाद्र । सांसद नभएको व्यक्ति छ महिनाभन्दा ब,ढी मन्त्री ब,न्न सं,वि,धा,नले दिदैन । अबको दश दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनो,नित सां,सद बन्न नसके अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्व!तः पद मु,क्त हुनेछन् ।खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयको समेत जि,म्मेवारी पाएर सरकारका प्रव,क्ता समेत छन् । अढा,ई वर्ष सरकारमा रहेका पूर्व ग!भर्नरलाई राष्ट्रियसभामा पुनः म!नोनित गर्ने च,र्चा पनि थियो । प्रधानमन्त्री ओली पनि उनलाई म!नोनित गर्ने पक्ष,मा थिए । तर, ने,कपा वि,वाद मिलाउने क्रममा अरुलाई नै म,नोनित गर्नुपर्ने प,रिस्थित बनेको छ ।
खतिवडा सरकारबाट बि,दाई हुने नि,श्चितप्रायः भएपछि ने,कपाभित्र अ,र्थमन्त्री बन्ने दौ,डधुप चलेको छ । रा,ष्ट्रियसभामा म,नोनित सदस्य बनेर उपप्र,धानमन्त्री सहित अर्थको जि,म्मेवारीमा बामदेव गौतम आउने चर्चा पनि छ । गौतम प्रतिनि,धिसभाको चु,नाव हा,रेकाले सं!विधान अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य भएपनि मन्त्री बन्न नपा,उने पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि का,नुनले कस्तो व्या!ख्या गरेको छ भन्नेबारे परा,मर्श थालिएको छ । गौतम भने सरकारमा गएर श,क्ति सञ्चयको रण,नी,तिमा लागिसकेको बुझिएको छ । उनी पुनः श!क्ति सञ्चय गरेर भविष्यमा ने!कपा अध्यक्ष बन्ने मह,त्वाकां!क्षाका साथ प्र,स्तुत हुने तया,रीमा छन् ।
अर्थमन्त्री भइसकेका सुरेन्द्र पाण्डे पनि सरकारमा जाने चर्चा छ । ने,कपा वि,वाद स,माधानका लागि मन्त्री!मण्डल पुर्न,गठन हुँदा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल दुवैले मन पराएका पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने ल,बिङ भइ,रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली नि,कट नभएकाले उनले उक्त मन्त्रालयले पाउने स,म्भावना क,मजोर छ ।ने,कपाभित्र अर्थमन्त्री बन्न पूर्व ए,मालेका केही नेताहरु पनि स,क्रिय छन् । म,हासचिव विष्णु पौडेलको सम्भा,वना पनि रहेको छ । ओलीले सकेसम्म आफ्ना वि,श्वासपात्रलाई नै अ,र्थको जि,म्मेवारी दिने स,म्भावना ब,लियो छ । source -point nepal
कोरोनाको खोप बाँड्नुअघि डब्लूएचओले ल्यायो नयाँ योजना, १ सय ७२ देश सहभागी,,,हेर्नुहोस् ।
नैति`कतामा प्रश्न उठेपछि पद त्या`ग गर्नु नै उचित : गाेकुल बाँस्कोटा,,,हेर्नुहोस् ।
“सरकार ढाल्ने खेलमा लागेकाले प्रचण्डलाई साथ दिन सकिनँ : भट्ट”